यसरी एका`एक कुवेतले किन फि`र्ता गर्दैछ नेपालीलाई ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/यसरी एका`एक कुवेतले किन फि`र्ता गर्दैछ नेपालीलाई ??
काठमाडौं, २२ वैशाख , वैदेशिक रोज`गारीमा कुवेत पुगेका करिब तीन हजार नेपालीलाई ‘हार्दि`कता पूर्वक’ त्यहाँको सरकारले फिर्ता पठाउने भएपछि नेपाल सरकार अन्यौलमा परेको छ ।
कुवेत सरकारले गत अप्रिल १ देखि नै त्यहाँका आ`प्र`वासी कामदारलाई घर फिर्तीका लागि आम`माफप् (एम्नेष्टी)को ‘आकर्षक प्याकेज’ घोषणा गरेको थियो।त्यसमा नेपा`लको पालो २६ अप्रिल देखि ३० सम्म राखेको थियो। तीन हजार भन्दा बढी नेपालीले आवेदन दिएको दूता`वास अधिकारीले जानकारी दिए।
साउदी अरेबियाले पनि कोभिड अघि घोषणा गरेको एम्ने`ष्टी खोल्न सक्नेछ भने त्यस्तै एमनेस्टी यू`ए`ईले पनि गर्न सक्ने दूता`वास अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छा`पेको छ ।
साउदी अरेबियाले पनि कोभिड अघि घोषणा गरेको एम्ने`ष्टी खोल्न सक्नेछ भने त्यस्तै एमनेस्टी यू`ए`ईले पनि गर्न सक्ने दूतावास अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।